Ikhosi yeArcGIS isetyenziselwe ukuPhononongwa kweMaminerali- iGeofumadas
NgoJulayi, 2012 Iiphotography, Ukufundisa i-CAD / GIS
Imithi ukuba hlathi yinkampani kunye ngoqeqesho umdla kwindawo geospatial ubunjwe abaziingcali kwiinkalo ezahlukeneyo, iingcali ezamkelweyo ekwaziyo yokudlulisela ulwazi pedagogically kuluncedo kwaye ufuna ukwabelana ngamava noogxa babo.
Ngeli thuba Imithi eyenza ihlathi ifuna inqanaba elitsha leKhosi ekwi-Intanethi yeArcGIS esetyenzisiweyo kuphononongo lwezimbiwa. Le yikhosi enomdla apho ngaphandle kokufunda ukusebenzisa isixhobo se-GIS, ijolise ngokubaluleka kulawulo lwedatha yejoloji. Kucwangciswe kumanqanaba amabini:
1. Ndiqala i-10 Septemba ye-2012.
Ubude beeveki ze-8, kunye neeyure ezingama-50.
Le khosi ijoliswe kubo bonke ootitshala abafisa ukulawula ulwazi lwabo kwi-GIS kwiindawo ze-ArcGIS. Kuzo zonke iiseshini ezisixhenxe ezenza ikhosi, uya kufunda ukujonga kwaye uqhube idatha kunye nokuhamba ngokulula ngaphakathi kwesicelo.
Inkambo ibaluleke ngokwenene. Iimpawu ezicetywayo zokusingatha ulwazi lwe-geological, inomdla okhethekileyo ootitshala abasebenzayo kwezo zombini kunye nokuveliswa kwemigodi, kodwa kungasetyenziselwa nayiphi na insima yomsebenzi.
Iseshoni se-1: Isingeniso kwi-GIS. Iimeko zokusetyenziswa kwe-GIS kwi-exploration yamaminerali. Ukugcina isiluleko kunye negama leefayile.
Iseshoni ye-2: Indawo ye-ArcGIS: i-ArcMap, i-ArcCatalog ne-ArcToolbox.
Iseshoni 3: Ukusetyenziswa kweempawu zamanqaku kumanqaku, imigca kunye nama-polygoni.
Iseshoni ye-4: I-Georeferencing yamaphupha afundwayo.
Iiseshoni ze-5: Iinkqubo zokulungelelanisa. Iingcamango ezibalulekileyo kunye nezinye iindlela zokuphepha iimpazamo.
Iseshoni ye-6: Hlela iipolgoni kunye neetafile. Ukufezekiswa kocwangco lweeyunithi ze-lithological ukususela ekuqaleni.
I-7 Iseshoni: Ukubunjwa kwe Kuluhlu imephu yokuprinta kwiplani okanye iphrinta yasekhaya.
Ukufezekiswa kovavanyo oluthile.
2. Ndiqala u-Novemba 12 we-2012.
Ubude beeveki ze-10, kunye neeyure ezingama-70.
Le khosi yenzelwe iingcali abasebenza kuzo zombini imveliso kwezimbiwa lokuhlola kunye zam: zokuma, geochemists, zesayensi, iinjineli zemigodi, beemaphu, zejografi, abahloli, geomensores, umncedisi komhlaba okanye nayiphi na enye yokusebenza yobuchule inkcazelo neznye. Kuya kukunceda ulawule ulwazi elula, ukuzila, kakuhle kwaye ngqo, siphepha iimpazamo ekuqhelekileyo ukuba kwenzeka amanyathelo ahlukeneyo ababandakanyekayo inguqu le datha ibe ngolwazi olufunekayo ukuze enze izigqibo.
Kufuneka ube nolwazi oluyisisekelo lwe-ArcGIS okanye ugqibe ikhosi ye-1.
Iseshoni ye-1: Hlanganisa kwaye ubonise umgca we-lithology nge grid ye geophysics.
Iseshoni ye-2: Ukusebenza ngemifanekiso yesatellite.
ISession 3: Ukusetyenziswa kweefayile ze-raster.
ISeshini ye-4: Sebenza ne-geochemistry yeesampuli zomhlaba.
Iseshoni ye-5: Intshayelelo kwiinkcukacha zolwazi. Ndisebenza kunye neetafile ezihambelanayo.
ISeshini ye-6: Isimboli esifanelekayo sokubumba ne-geochemistry.
Iseshoni ye-7: Izixhobo zokuqhubela phambili nokufakwa kwifomathi geodatabase.
Iiseshoni ze-8: Iimodeli zokuphakama kweDigital (DEM) kunye nayo yonke into engayifumana kubo kunye nokwenza i-geoprocessing (extension 3D Analyst).
Iiseshoni ze-9: Ukuboniswa kwe-3D, ukuqaliswa kwi-ArcScene, ukuguqulwa kwe-vector ukusuka kwi-2D ukuya kwi-3D (isandiso se-3D Analyst).
Utitshala lwezifundo: UMarta Benito, onguchwepheshe kwiinkqubo zolwazi ngeendawo. Emva kokubamba isikhundla seMphathi we-GIS kwezinye zeenkampani eziphambili zeemigodi kwihlabathi, njengangoku ungumlingani oyintloko kunye nomcebisi kwinkampani ye-Natural Resources GIS.
Ulwazi olungakumbi: http://www.arbolesquehacenbosque.com/curso_sig.htm
Kwakhona kwiposi info@arbolesquehacenbosque.com ungacela ulwazi oluthe xaxa malunga namaxabiso, imodemu kunye nohlobo lokuvuma.
Ukongezelela sincoma ukuba sibone ezinye izixhobo kule webhusayithi, njengale ithala lelayibrari, apho kukho izikhonkwane zokukhuphela amaxwebhu enokuqinisekileyo ukuba luncedo.
Post edlulileyo«Ngaphambilini Kwenzeka ntoni kwi-40?
Post Next I-International Virtual Cadastral SymposiumOkulandelayo »
Iimpendulo ezi-4 "zekhosi ye-ArcGIS esetyenzisiweyo kuphononongo lwezimbiwa"
Lorena Pillajo uthi:
Xa iqela elitsha le-intanethi liqala
UWilfar T. Barraza uthi:
Ixesha elifanelekileyo!, Evela kwimibuliso yaseColombia, le khosi: «Ikhosi ye-ArcGIS isetyenziswe kuVavanyo lweZimbiwa» sele ichaziwe?, Ukuba kunjalo, iya kuphinda ichazwe nini?
Ndicela isimemo esisemthethweni ukuba sibonise inkampani apho ndisebenza khona, kwaye ndiyifake imvume kunye nokugunyaziswa kokuhamba kwezifundo.